VHL သည်အသင်းကလပ်အသင်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သည့် VHL ကလပ်သည် KHL အသင်း၏ခြံဖြစ်သနည်း။ သင် morons ဆိုက်ဘေးရီးယား Novosibirsk-Ermak Angarsk VHL သည် VHL ဖြစ်သည်။ အသင်းများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များရှိသည်။ ပြီးတော့ကစားသမားအချို့ ...
Stanley ကဘယ်သူလဲ အဘယ်ကြောင့် NHL ဖလားသည်သူ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်ဖြစ်သနည်း သင်္ဘောသဖန်းသီးသည်ထိုသူကိုသိ၏။ Spartacus များအတွက်ရွှင်လန်း။ ငါအမှတ်များအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဇာတ်လမ်းကိုဖတ်ပါ။ ဝီကီပီးဒီးယား၏ပရိသတ်များအတွက်သင်ဆက်လက်ထားရှိမည်ဖြစ်သောသင်္ဘောသဖန်းသီး) KS သည်အဓိကဟော်ကီဖြစ်သည်။
Dynamo Moscow ရေခဲနန်းတော်ဘယ်မှာလဲ။ မီတာဖြင့် Dynamo မှ metro ဘူတာသို့သင်သွားမည့်မီနီဘတ်စ်ကားတက္ကစီ ၁၈ မီတာ (metro Dynamo-m ။ Polezhaevskaya) ဖြင့်သွားနိုင်သည်။ စတုရန်းပေါ်တွင်မီနီဘတ်စ်မှတ်တိုင် ...
လာမယ့်အိမ်တွင်းပွဲစဉ်အတွက် Ombk ဒေသဟော်ကီကလပ်၏လက်မှတ်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဝယ်ရမည်နည်းချစ်ခင်ရပါသောဟော်ကီပရိသတ်များ! ပွဲများအတွက်လက်မှတ်များရောင်းချခြင်းဆက်လက် - ၂၈/၂၀၁၀ ။ HC Avangard - HC MVD (ကစားပွဲကို ၁၉း၀၀ တွင်စတင်သည်) ...
သင်ဘယ်လောက်လိုအပ်တဲ့ဟော်ကီလက်အိတ်ကိုရွေးချယ်ရမလဲ။ ညွှန်ကြားချက်များ - ၁) သင်၏လက်ချောင်းထိပ်မှအကွာအဝေးကိုတံတောင်ဆစ် pad ၏အတိုင်းအတာကိုတိုင်းတာပါ။ ခြေထောက်တွေကနူးညံ့စွာမကိုက်သင့်ဘူးဆိုတာကိုသတိရပါ။
ငါတို့ချစ်သောကလပ်ကိုဂုဏ်ပြုသောမင်းသမီး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်အမြဲရှိသည်။ Oooooo က clap-clap ဒါ DYNAMO !!!! clap-clap-clap ချစ်လှစွာသောကလပ် clap-clap မင်းနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်! အသင်းတစ်သင်းကိုမယုံလျှင် ...
ဟော်ကီပွဲဘယ်လောက်ကြာမလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ မိနစ် ၂၀ ကာလ၊ ၁၅ နားလပ်ချိန်၊ ၎င်းသည်စင်ကြယ်သောအချိန်၊ ၂ နာရီအပေါင်းသို့မဟုတ်အနှုတ် ၂ ခန့်မှန်းခြေ ၂ နာရီ (အပေါင်း - အနှုတ်) ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်။ ၂ အကြောင်း ...
thermoforming ဖြင့်မည်သည့်ဟော်ကီစကိတ်များကိုသင်အကြံပြုမည်နည်း။ ဟော်ကီတွင်၊ စကိတ်များကိုခြွင်းချက်သုံးမျိုးခွဲခြားထားသည် -“ elite pro” (NHL နှင့်ရုရှားစူပါလိဂ်အပါအ ၀ င်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကလပ်များမှကစားသမားများ၊ ကစားခြင်း၊ စျေးနှုန်း - ထိပ်တန်းမော်ဒယ်များ) ...
မည်သူမဆိုဟော်ကီဂိုးသမားယူနီဖောင်းမည်မျှအကြံပေးနိုင်သနည်း။ ဆယ်ကျော်သက် ပစ္စည်းတိုင်း။ ၃၀ ကီလိုဂရမ်အစစ်အမှန်အမျိုးသားတွေဟော်ကီကစားတာဘာကြောင့်လဲ ဤမေးခွန်း၏အဖြေသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုကိုနောက်ပြန်လှည့်လို့ခေါ်တယ်။ Chemical Equilibrium ဆိုတာဘာလဲ။ အဲဒါကိုဘယ်လိုရွှေ့ပြောင်းရမလဲ နောက်ပြန်လှည့်တုံ့ပြန်မှုများမှာဥပမာအားဖြင့်ပစ္စည်းတစ်ခုရရှိသောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သည်။
ငါတကယ်ဟော်ကီအကြောင်းကိုကဗျာလိုအပ်ပါတယ်!4လိုင်းသို့မဟုတ် 10 အများဆုံးအတို ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ! ချွန်ထက်သောခြေထောက်ဖြင့်ဟော်ကီချောင်းခြောက်ချောင်းရှိသည်။ မကြာခင်မှာပဲနေစတင်လိမ့်မယ်။ ငါထတယ် ...
ဟော်ကီ puck ပျံသန်းနိုင်သည့်ကီလိုမီတာ / အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကားအဘယ်နည်း။ ကျွန်တော့်အတွက်တစ်ခုခုမလုံလောက်ပါ - ၁၆၉ ကီလိုမီတာ / နာရီ ၁၆၈ ကီလိုမီတာ / နာရီ "ဂျာစီ" ရှိ Fetisov အချိန်မှာတောင်သူဟာကီလိုမီတာ ၁၈၀ ကျော် / ပစ်ချပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ ၂-၃ နှစ်က ...
ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ၊ "Molodezhka" တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲမှာဘယ်အရေးယူမှုမျိုးတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲ။ ဒီနယ်ပယ်မှာဘယ်မြို့ပါလဲ။
ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ၊ "Molodezhka" တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲမှာဘယ်အရေးယူမှုမျိုးတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲ။ ဒီနယ်ပယ်မှာဘယ်မြို့ပါလဲ။ Podolsk "Molodezhka" ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးကိုမော်စကိုဒေသ၊ ဟော်ကီတွင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးမြို့တော် Podolsk ဟုလည်းဆိုနိုင်သည်။ အဓိကပြိုင်ဘက်များ၏အခန်းကဏ္ကို ...
ဟော်ကီစည်းမျဉ်းများ?! ရေခဲပေါ်တွင်ကစားသမားများကစားပွဲတစ်ခုအတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသင်းတစ်ခုသည်ရေခဲပေါ်တွင်တစ်ပြိုင်တည်းကစားသမား (၆) ယောက်ထက်မပိုနိုင်ပါ။ ဒီလိုဖြစ်လာရင်အဖွဲ့က ...
ရေခဲပြင်ဟော်ကီတွင်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ကစံချိန်တင်နိုင်သူမှာ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင်တောင်ကိုရီးယားနှင့်ထိုင်းအမျိုးသားအသင်းများအကြားဖြစ်သည်။ ၉၂: ၀ ။ တောင်ကိုရီးယားလူ ဦး ရေမှာ ၃၉.၁၃ စက္ကန့်ဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယားရှေ့တန်း Dongwan Song (...
PLAYOFF ဆိုတာဘာလဲ Play-off (English PLAYOFF) သို့မဟုတ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင်အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင်ကစားသမားကိုရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပြိုင်ပွဲမှဖယ်ထုတ်ပစ်သောပုံဆွဲသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ အော်ဒါဆွဲခြင်းပုံမှန်အားဖြင့် (သို့သော်မဟုတ်ပါ)
ပုံမှန်စကိတ်ချွန်ထက်မှုသည်စကိတ်စီးခြင်းနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ အဘယ်အရာကိုထက်မြက်စေသနည်း အားကစားနန်းတော်များနှင့်ပျော့ပျောင်းသောရေခဲသေတ္တာများအတွက်ဖြောင့်သောချွန်ထက်မှုနှစ်မျိုးရှိသည်။
KHL နှင့် NHL ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ငါဘာသာပြန်ချက်သိတယ် ... ဒါပေမယ့်ငါနားမလည် .... သူတို့ဘယ်အချိန်မှာကျင်းပသလဲ
KHL နှင့် NHL ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ငါဘာသာပြန်ချက်သိတယ် ... ဒါပေမယ့်ငါနားမလည် .... သူတို့ဘယ်အချိန်မှာကျင်းပသလဲ Continental Hockey League အမျိုးသားဟော်ကီလိဂ် Continental Hockey League))) National Hockey League))) Continental Hockey League အမျိုးသားဟော်ကီ ...
အဝတ်လျှော်အလေးချိန်လား အဝတ်လျှော်လေယာဉ် DIN 125A, GOST 11371-70 အရွယ်အစား, မီလီမီတာအလေးချိန်ကီလိုဂရမ် / 1000pcs နှင့်အတူလိုက်နာမှု DIN 6A, galvanized ။ PCs ထုပ်ပိုး။ M 1,02 25 000 M 8 1,83 15 M 000 10 3,57 ...
နိုင်ငံသားက Radulov ကဘယ်သူလဲ။ ! Aleksa # 769; ndr Vale # 769; Rievich Radu # 769; ငါးဖမ်းခြင်း (ဇူလိုင် ၅၊ ၁၉၈၆၊ Nizhny Tagil, RSFSR, USSR) ရုရှားဟော်ကီကစားသမား ကလပ်၏ညာတောင်ပံ Salavat Yulaev ။ ရုရှားအမျိုးသားဘောလုံးကစားသမား၊ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံနှစ်ကြိမ် (၂၀၀၈ ...
76 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,619 စက္ကန့်ကျော် Generate ။